Shir ku saabsan ka hortaga Fircooniga oo lagu qabtay Buuhoodle ( Sawiro) – Radio Daljir
Shir ku saabsan ka hortaga Fircooniga oo lagu qabtay Buuhoodle ( Sawiro)
Maarso 19, 2013 5:16 b 0
Buuhoodle, March 19, 2013, Kulankan oo uu soo qaban qaabiyey xafiiska Wasaarada horumarinta haweeenka iyo arimaha qoyska Puntland ee gobolka Cayn ayaa lagaga hadlay dhibaatooyinka uu ?haweenka Soomaaliyeed ku hayo gudniinka waxyeelada leh ee Fircooniga loo yaqaano.
Shirkan oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horayn waxaa ka hadlay duqa Degmada Buuhoodle ee maamulka Puntland Cumar X Cabdi, oo furay kulanka,
Duqa degmada ayaa sheegay in Fircoonigu yahay mid aad u dhibaato badan hase ahaatee dhibaatadaasi ay tahay mid ay dumarku keensadeen loona baahan yahay inay iyagu iska joojiyaan,” mida wax gudaysaa waa dumar, ta la gudayaa waa dumar, mida ugeysaana waa dumar idinkaana ka cabanaya, waxaa fiican inaad idinku gaar isaga waanisaan arimahaasi” ayuu yiri duqa deggmada Buuhoodle.
Isuduwaha wasaarada haweenka ee gobolka Cayn Adna Cali Axmed ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay waxayna ku dheeraatay ujeedada kulankan iyo muhiimada uu bulshada ugu fadhiyo.
Waxay sheegtay in kulankan bulshada lagaga wacyigelinayo gudniinka xun ee Fircooniga ah iyadoo sheegtay in bulshadu xiligan fahmeen gudniinkaasi.
Culimada diinta oo qayb ka ahaa kulanka ayaa sheegay in gudniinka Fircooniga ahi uu yahay dhaqan aan wax lug ah ku lahayn shareecada islaamka loona baahanyahay in la joojiyo gudniinkaasi, hase ahaatee waxay bulshada ku booriyeen inay raacaan Nunaha Nebiga NNKH ?kuna dhaqmaan gudiniinka uu jideeyey.?
Intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay qaar kamid ah haweenkii kasoo qaybgalay shirkaani gaar ahaana kuwa iyagu ka shaqeeya arimaha gudniinka fircooniga ah iyagoo sheegay inay ka tanaasuleen arintaasi.
Kulankani looga hadlay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ah ayaa dhamaan bulshadii kasoo qayb gashay waxay isku raaceen in la joojiyo lagana hortago dhibaatooyinkiisa.
Hay’adda daryeelka bulshada Puntland oo kormeertay naafadda Garoowe